Kedu ka m ga-esi kwụsị oche ịnyịnya ígwè m ka ọ ghara imerụ ahụ? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Okpokoro oche mgbu nwoke - inogide ngwọta
Okpokoro oche mgbu nwoke - inogide ngwọta
Kedu ka m ga-esi kwụsị oche ịnyịnya ígwè m ka ọ ghara imerụ ahụ?
E nwere ọtụtụ ihe ị ga - eme iji belataerughị alanagbochieguzobe ọnya.
Fit: Ọ dị mkpa na gịigwe kwụ otu ebeejikere nke ọma.
SaduluNhọrọ: Ndabere ọ bụla dị iche mana enweresaduluọpụpụ dị gị mma.
Emollient / Chamois Ude:
Mee nwayọ nwayọ:
Echi, Trainiacs. Mụ na nkịta na-aga ịnya ịnyịnya ígwè na Zwift n'ime onye na-enye ọzụzụ na oge eruola mgbe m nwara ịnyịnya Cobb ndị a. Yabụ ugbu a, aga m egosi gị otu esi agbanwe oche na ijide n'aka na ị nwere nha agụ ma na ntọala ị setịpụrụ ị ga-esi ebe ị na-enweghị isi ihe mgbu mbụ nke ihe mgbu. .
Ọ ga-akpọrọ gị gaa n'ogige bọọlụ nke nkasi obi. Nke a bụ ihe ị ga-achọ maka mgbe ị na-agbanwe akpa. Lelee Akpụkpọ anụ ahụ a na-abịa site na igwe kwụ otu ebe.
Jiri ya tụnyere akwa Cobb a, enwere nnukwu esemokwu ole na ole. Number otu, obosara dị ntakịrị. Echere m na nke a dịtụ obosara.
Number abụọ, rails bụ al. wuru obere oge ma anyị ga-ekwu maka ihe kpatara ya. Ya mere na na ngwụcha ọ bụ toro ogologo, saa mbara karị, ma ọ nwere ike ịdị obere karịa.
Nke ahụ pụtara na anyị gafere usoro ntọala niile, usoro nrụpụta nrụgide na Alter Ego Sports, iji jide n'aka na akpọrọ m nke ahụ, mana achọrọ m ịbanye na otu ntụpọ ahụ. Ọ bụ ntakịrị aghụghọ karịa ịsị, 'Ọ dị mma, nke ọma, aga m atọghe kposara, wepụ ihe a wee tinye ya na. 'N'ihi na, dị ka ị pụrụ ịhụ, nhazi ahụ dị iche.
Yabụ iwere nha abụọ tupu iwepu ihe mbụ. Nọmba otu. Achọrọ m iji okpu azuokokoosisi n'ihi na ọbụlagodi na njikwa aka tụgharịrị ntakịrị ma ị gapụtụ, ị ka na-agbanye otu ntụpọ ahụ n'ihi na ọ na-atụgharị n'otu ebe ahụ.
Site n'ebe ahụ, tụọ ihu imi ihu nke sadulu ahụ n'akụkụ n'akụkụ ala nke mgbatị ụkwụ na elu, ọ bụghị ala nke sadulu ahụ n'ihi na okpu ahụ nwere ike ịgbanwe na ọkpụrụkpụ nke sadulu ahụ, mana ị tụrụ ya n'elu nke Ihu nke sadulu. Yabụ n'ụzọ ziri ezi ebe ahụ mgbe ọ malitere larịị wee nwaa ịhazigharị nke ahụ site n'ịga n'ihu na azụ na ala na oche oche, ka anyị mee nke ahụ ugbu a, yabụ ihe ịkwesịrị ime bụ na ị ga-agaghachi na n'ihu ntakịrị , m na ikpe m mere iru mbụ na mgbe ahụ elu nke sadulu na-esote. Na-ewetara ịdị elu nke sadulu ahụ agbagọ iru, yabụ na ị ga-enwe ụdị nke ị ga-edobe ihe niile, yabụ na ọ bụ ya mere m ji nwee nsogbu mgbapụ ebe a.
Jide n'aka na ị na-eji mpempe akwụkwọ na-agagharị na ntanetị na-eme ka ị ghara ijide onwe gị na cranking. Cranks? Oh Mgbe ị na-agbaji carbon ị na-ejide onye ọ bụla ntakịrị, na-ejide n'aka na nha ahụ ziri ezi na mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị mee nke ahụ, atụfula nke ọzọ.
Yabụ ebe ahụ ka m kwesịrị ịgbawa, ugbu a enwere m ike itinye ha abụọ. Ma ugbu a, nye m otu awa na ntakịrị nke Zwiftand m ga-agwa gị otu m si amasị sadulu Cobb a. (Obi ụtọ dị egwu) you chọrọ ka m laa? - Ee, biko. - Ka ọ dị. - Ndeewo, sir. - The downside of a smart trainer, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe a niile Zwift stof ma a wahoo kicker mmasị, anyị ga-adị na ebere nke ihe ọ bụla ọzọ na ndụ anyị dị ka internet ọrụ.
Naanị m na-arụ ọrụ ọsụsọ, echere m na m na-agba ịnyịnya ígwè m ruo minit 20 ma eleghị anya m ka nwere oge iji rụchaa ọrụ a, nke ọma, nkeji 25 nke ịkwọ ụgbọala, oku ekwentị abụọ ma ọ nweghịkwa ịntanetị na Bluetooth mgbe e mesịrị, anaghị m na-agba ịnyịnya, enweghị m oge. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ etiti oge ahụ, Taren ga-ewe iwe. Gwa gị, na nkeji iri abụọ na ise nke ịnya ịnyịnya na 30 nkeji mgbe e mesịrị na ekwentị na ụlọ ọrụ ịntanetị, enwere m ike ịgwa gị na Cobb sadulu adịghị njọ The Cobb- Saddle na-anọdụ ala karịa nke ahụ.
Ihe mkpuchi anụ ahụ nke anụ ahụ ebe a adịchaghị elu dị ka ọdụ ụgbọ mmiri Cobb ebe a, na gịnị? John Cobb na-ekwu na ọ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè ndị a dị elu karịa ka ha nwee ntakịrị mmetụta ujọ. Nke a abụghị ikpe na ihe abụọ ndị a, ma John Cobb na-ekwu na na nkezi, ọ na-agba mbọ ime ohere ị nwere ike ịlaghachi na azụ na okporo ụzọ ndị a ogologo oge. Ọ chọrọ ka ndị na-eme egwuregwu nwee ohere karịa otu ha nwere ike ịkwaga sadulu ahụ, iji mee ka ọ dị mma n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, okporo ụzọ ndị a dị elu ka ha nwee ike irube isi na ogologo oge ka ọ dịrị ha mfe idozi.
Mgbe ahụ, ọ na-agbakwunye ihe dị ka gram asaa na sadulu, mana ọ na-asị, 'know maara ihe ọ bụrụ na anyị tinye gram asaa, mana ọ ga-eme ka ọ dịrị onye na-agba ya mfe. 'Nke a bụ nkwekọrịta ọ ga-eme ụbọchị niile. Enwere obere ọwa na anụ ahụ nke anụ ahụ ebe a, mana ọwa zuru oke na Cobb sadulu a.
O doro anya na gịnị ka John Cobb mere mgbe? Ọ malitere ịme akpa ịnyịnya nke ha na-ekwesị ntụkwasị obi ruo taa. Ha ga - ebido site na ihe edobere mgbe ndi na agba ya jikwa ya nwalee ya ha jua ndi na agba ha ebe e nwere nsogbu na ebe enwere nsogbu na ebee ka nsogbu ndi ahu di, ebe ahu ka ha na-amalite ichapu ihe. Na ihe ha rụzuru dị ka akwa siri ike n'ihi na ha nwere ike ijide ọtụtụ mpaghara nsogbu dịka o kwere mee mgbe ịkpụ afụ ọnụ.
Ihe ndozi a dị ntakịrị karịa nke ahụ, ya mere ọ ga-atụtụkwu ntakịrị. Anyịnya ahụ anụ ahụ na-ehulata n'oge ụdị akwa akwa Cobb ahụ, ọ nọ n'akụkụ dị elu. Mgbe ị na-etinye dokwasị, ị chọrọ ka ọ dị larịị dị ka o kwere mee ma ọ bụ dịtụ ntakịrị ala.
Chọghị ịga oke tere aka n’ihi na mgbe ahụ ị ga-amalite slide na ihe ọjọọ ga-eme n’okpuru ime gị. Ya mere, ka anyị pụọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ihe ndozi gị, nke ahụ bụ ihe ị nwere ike ime.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu ihe ahụ ma chọọ ịkwaga ya, ịnwere ike iji akara akara akara wee kaa akara ebe a na oche oche ị nwere ike ịlele post ahụ ebe ọ kwesịrị ịdị, mana achọrọ m ịgbanwe ọnụ ọnụ ị ga-enweta nha ndị a ka ị nwee ike ịbịaru ebe ị maara na ọ ga-adị mma. Ugbu a nwee nkụda mmụọ, m ga-apụ igwe kwụ otu ebe a, naanị chefuo ya, aga m echefu ya, m ga-agakwuru acupuncturist Peggy. Ọ ga-arapara obere ihe n’ikiri ụkwụ m.
Ọ dị mma, ya mere ana m agbapụ gị ihe na ebe a. Nọmba otu, nke a bụ triathlon Taren HQ ọhụrụ, esoghị m gị kerịta ọganiihu n'ihi na enwere ihe ịtụnanya nye unu niile, a na m eche igosi ya ruo mgbe emechara ya, ọ dị mma.
Mana ebe a, lelee nke a. (egwu dị egwu) Na 270 mita mgbe e mesịrị, m nọ na acupuncturist. Ọ ga-adị ezigbo mma ebe a.
Colọ Coach Pat erughị otu maịl. Ọdọ mmiri ahụ dị otu kilomita site na ọkara K na ntụziaka ahụ. Triathlon Taren HQ dị ihe dị ka ụkwụ ise site na nzọụkwụ m azụ.
Ọ bụrụ na m kwaga, m ga-aga ebe ọ bụla dị ihe dị n'ime osisi atọ na ígwè itoolu. Mana enwere ike ọ bụghị oyi tundra. Mkpa na ụkwụ, mmmmmmmm.
Ma abụ m nwoke siri ike ka m wee mee ya. Adịghị m ọtọ ebe a, mana m dị mma. Nke a bụ acupuncturist Peggy. - Hi.- Ọ na-elekọta m ma na-akụ m agịga. - Ana m eme (ọchị). - Ma chịrị ọchị.
Ọ bụ eze kachasị mma. Ọ kachasị mma. O wetara mụ na Kim onyinye ekeresimesi n’afọ gara aga.
Oche oche ịnyịnya ibu kwesiri iwe?
Ọ bụ nkịtị ka gị butt na-adịtụakpịrịmgbe ịnyịnya, n'ihi na mgbe ị na-anọdụ na aoche igwe kwụ otu ebe, imirikiti ibu gị na-ekesa na obere ọkpụkpụ dị ntakịrị na pelvis gị. Nke ahụ nwere ike iduga nhụjuanya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nọ ogologo njem, ka Maddy Ciccone, onye nkuzi SoulCycle na Boston na-akọwa.Ọnwa Ise 14, 2018
Kedu ihe kpatara ịgba ịnyịnya ígwè ji emebi bọọlụ m?
Na ihebu—Ị gharịị ya — nhọrọ ezighi ezi,igwe kwụ otu ebedabara, na / ma obu abuo. Have nwere akwara a na-akpọiheakwara pudendal nke na-aga n'etitinke giakụkụ ahụ site nanke giperineum kanke giike. N'ikota akwara ahụnwere ikeakpata ihe mgbu naiheakpịrị,amụna / ma ọ bụ perineum.Abụọ 26, 2020
0:00 Ndewo ndị mmadụ, isiokwu nke taa ga-atọ ụtọ, ọ naghịzịkwa ekwupụta ọnya obi, otu esi egbochi mkpọtụ na ahụ erughị ala ka ị na-agba ịnyịnya ibu Ya mere, edemede a bụ maka gị ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu na mpaghara gị ma ọ bụ nkasi obi mgbe ị gbasịrị igwe kwụ otu ebe, adịla, dịka n'ịnyịnya n'èzí gị ma ọ bụ n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ n'ụlọ gị. Ọ bụ ihe na ọ na-eme. Ya mere, akpọtara m nnukwu ọkachamara.
Nke a bụ di m, Kevin Anthony, aka a Eziokwu Warrior, ọ ga-eweta ọrụ ya na tebụl. Dị ka mgbe niile, ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na ọwa a, nabata, Abụ m Celine Remy, mmekọrịta chiri anya na ọla, na m nọ ebe a iji nyere gị aka ịbịaghachi sexy na ndụ Ya Kevin, amaara m na ị nwere ọtụtụ ederede ederede , edere kemgbe ị gbara afọ iri abụọ na ụma, ọ dịtụla mgbe ị nwere ihe mgbu? 1:05 Ọ dị mma, nke mbụ, Obi dị m ezigbo ụtọ ịnọ ebe a na ọwa a. May nwere ike ịhụla m na Podcast Labhụnanya Lab Podcast tupu mgbe ahụ, mana nke a bụ oge izizi ị hụrụ m na edemede akwụkwọ ịhụnanya na-abụghị ịhụnanya. 1:16 Kpamkpam, na anyị ga-eweghachi ya ọzọ mgbe.
Ya mere, hey, tinye ihe ndị a n'okpuru, mee ka anyị mata ihe ọzọ ịchọrọ ịma gbasara isiokwu Kevin maka gị mgbe niile n'ihi na anyị hụrụ ya n'anya ịnọnyere anyị. 1:32 Ọ dị mma, yabụ ka anyị adanye na ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwee ihe mgbu ma ọ bụ ụfụ mgbe ị na - agba ịnyịnya. Nke mbụ, ọ ga-amasị m ịsị na m na-agba ịnyịnya ígwè ruo ihe karịrị afọ 25, site na nke a, m kwụsịrị ịkwụsị ịgụ.
Echere m na ọ nwere ike ịbụ 27, amaghị m n'ezie, ọ bụ ogologo oge. Ọ bụ ezie na enweghịzi m ike ịnya ịnyịnya dị ka m na-emebu, m na-anọ ezigbo ụbọchị anọ n’izu n’ime sadulu na nke ahụ dịka ogologo kilomita na ọdụ. Ya mere enwere m ntakịrị ihe ọ ga-ewe. enwere ụfọdụ ndụmọdụ iji belata nro na / ma ọ bụ ihe mgbu. 12 Mgbe mbụ m hụrụ ha, m chịrị ọchị nke ukwuu n'ihi na ọ dị m ka m na-ele enyi ya anya, m dị ka ihe ọzọ2: 20 Gbaa ịnyịnya na ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ndị kwuru na ha ga-eyi uwe mkpụmkpụ ha ma yikwasị uwe mwụda mpụga .Ma ọ bụ ya.
Amaghị m otú ha si eme ya. Ikekwe ha enweghị akwa. Amaghị m.
Mana lee ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ izere ihe mgbu nke testicular, ị ga-ewepụ testicles gị n'ụzọ. Nke a bụ nke mbụ.
Oche ịnyịnya ígwè adịghị mma maka ụmụ nwoke nwere testicles. Ha adịghị. Ka-eme ihe n'eziokwu.
Stand kwụ n'ụzọ. Shorgba ịnyịnya ígwè ga-enyere aka ịhapụ ha n'ụzọ. Uru nke abụọ nke ịnyịnya ígwè dị mkpụmkpụ bụ na ha nwere padding.
Na padding n'okpuru gị itukwu ọkpụkpụ. Ha nwekwara padding n'okpuru nne na nna Neil na ngalaba Ego Ee, amaara m na ha nwere ike ịdị oke ọnụ, mana jiri ego ahụ wee nweta obere ịgba ịnyịnya ígwè. 3:09 Nke ahụ bụ naanị ihe ị ga-eyi Ọ dịghị uwe ime, obere mkpirisi.
Naanị mkpụmkpụ dị ezigbo mma ma ọ bụ ma eleghị anya abụọ. I lee ha anya. Na nke ahụ bụ ihe niile ị chọrọ. 3:16 Ee.
Yabụ ugbu a ị nwere ike iyi uwe dị mkpirikpi karịa uwe gị na-agba ịnyịnya. M na-eme nke ahụ.
Enwere m obere uwe m na-eyi nke m na-eyi n'uwe ịnyịnya ígwè m ma m na-enwekarị obere ịnyịnya ígwè kwesịrị ekwesị n'okpuru. Nke a bụ ihe a ga-emerịrị. 3:32 Ọ dị mma, ugbu a anyị amarala ka anyị gafere oche ndị ahụ na-ekwu n'ihi na echere m na ọ na-eme ka ụwa dị iche.
Amaara m na enweghị m bọọlụ mana amaara m na m ka nwere ihe mgbu mgbe m na-akwọ ụgbọala n'ihi na naanị nsogbu na oche ahụ, amaara m na enwere ihe dị na ya, amakwaara m na ị na-agwa anyị ka anyị bụrụ ihe anyị ga-eme. 3:48 Eeh. Ọ bụ nnukwu, enwere m ike ịgwa gị na m na-agba ịnyịnya ígwè tupu ha achọpụtabeghị ihe ha ga-eme banyere ya.
Anọ m ebe ahụ mgbe arụmụka niile bilitere. Anọ m ebe ahụ mgbe a hapụrụ ha. Mgbe m chọtara oche ọhụrụ niile ị hụrụ ugbu a, a ga m enwe ọtụtụ nghọta banyere ndị a.
Yabụ ebe a, enwere m akwụkwọ nnọchiteanya nke ejirila rụọ ọrụ You nwere ike ịgwa oche a nwere ọtụtụ, ọtụtụ, ọtụtụ kilomita. Ihe ole na ole gbasara oche a. Nke a bụ n'ezie bụghị ụdị oche m ga-akwado hy na nke a bụ kpam kpam ewepụghị.
Ma nke ahụ bụ otu n'ime nnukwu nsogbu ha ghọtara ihe ha ga-achọ n'oche kwesịrị ekwesị, ugbu a bụ otu Sit na canal dị n'etiti ma ọ dị ka ọ dị ntakịrị ebe a. ọ ga-ada, ọ ga-adị ntakịrị elu ebe a. N'ụzọ bụ isi, ọ na-emepụta ọwa na-eduga n'etiti.
Wayzọ ị nọdụrụ n’oche bụ n’ọkpụkpụ gị itukwu nke bụ ọkpụkpụ abụọ ahụ dị gị n’ukwu ebe a na ebe a, nke a bụ ebe ọkpụkpụ gị na-aga, ọ bụrụ na ọkpụkpụ gị dị elu ebe a mgbe ahụ nne na nna gị bụ Neom ka o si n’oche bilie. Enweghị nrụgide ọzọ na ya. Nke ahụ bụ otu ị kwesiri isi bụrụ.
Nọdụ n’oche igwe kwụ otu ebe. Yabụ nke a bụ oche ochie n'ihi na oche m niile dị mma gburugburu igwe m, ka m gwa gị mgbe ị bụ onye na-agba ịnyịnya, ịmara ma ọ bụrụ na ịhọrọ oche gị otu ị chọrọ ya, ị gaghị emebi ya ọ, M na-echeghị na-ebe m dị na-eme nke a isiokwu. 5:15 Ya mere, mgbe ahụ anyị ga-eme mgbanwe ahụ n'ihi na enwere ike itinye oche dị iche iche ma ọ nwere ike ime mgbanwe, nri? Eeh. 5:21 Ya mere, emeela m ịnyịnya ígwè ndị ọzọ na ndị ọzọ karịa m nwere ike ịgụ.
Ma enweghị m ike ịgwa gị mmadụ ole. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-egosi na a kpamkpam misaligned oche. Nke mbụ oche oche, nri.
Ya mere, ọ bụrụ na oche gị dị oke elu, ma ọ bụ ọbụna dị ala, ị nwere ike ịnwe nsogbu mgbu, ọ bụghị naanị nsogbu na ụbụrụ gị ma ọ bụ aha ndị mụrụ gị, kama nsogbu na ikpere gị na hips na ikekwe azụ gị. Nha bụ ihe mbụ m ga - akpọ mmadụ, nke ahụ ga - abụ ijide n’aka na i rutela mgbati mgbatị gị nke ịkụ ụkwụ gị nke na ị ga - ehulata ikpere gị. Nke ahụ bụ ya, ọ bụ naanị ntakịrị mgbanwe, ị chọghị ịgafe, ị chọghị inwe nnukwu mgbanwe, ha abụọ ga-akpata nsogbu.
Ihe kachasị mkpa bụ ọchịchọ. N’elu oche. Ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-abata na nsogbu ebe a.
Ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè na-apụta, oche ha dịkwa ntakịrị nkuku. Ọ dịghị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'ihe mgbu n'ihi ndị nne na nna mgbe ị na-enwe mmetụta mmetụta uche na ikekwe ị nwere nsogbu na nrụpụta gị. Debe oche gị otu a n'ihi na Ihe a ga-eme.
Nke ahụ na-enye nne na nna nsogbu. Ọtụtụ n’ime ibu ahụ na-anọdụ n’ihu oche ahụ, ọ bụghị n’azụ oche oche ebe ọ kwesịrị. Ihe ikwesiri ime bu bugharia oche di obere nke mere na azu di elu karie n’iru ka odighi adi.
Naanị ntakịrị elu karịa ihu. Fọdụ ndị ga-ekwu ọkwa, ọ dị mma, M na-ahọrọ ntakịrị mkpọtụ, nwayọ, dịtụ ala nke na-etinye nrụgide niile ebe a na oche ịnọdụ ala gị. Fọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè anaghị enwe mmasị na nke a n'ihi na ọ dị ha ka ha na-aga n'ihu.
Ma nke ahụ bụ n'ihi na ị ga-elekwasị anya ma lekwasị anya na ịchekwa ọkpụkpụ gị n'azụ oche ahụ, ọ bụrụ na ị mee nke ahụ ma ịnọdụ ọdụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma gbanwee oche oche ị gaghị enwe ihe mgbu. Akwọala m ọtụtụ puku kilomita. Emechaala m ọtụtụ ịnyịnya na ọtụtụ ịnyịnya ígwè, kwa, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, ị gaghị enwe ihe mgbu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ. 7:44 Na i nwere otu n'ọnụ maka ndị mmadụ ka ị na-a obere ezumike na mgbe ha na-agba ịnyịnya, guzo imeghe ya a obere na-mgbali anya n'ihi na a obere mgbe na-abịa azụ na-anọdụ ala.
Nri. 7:55 Kpamkpam. You makwaara, ọ bụrụ na ị bụ igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu, nke bụ ihe m na-arụkarị, ọ bụghị nke ahụ dị njọ n’ihi na ị na-arịgo elu mgbe niile.
Ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ ma nọrọ ọdụ na ịnyịnya nke ukwuu, nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu. Karịsịa mgbe ị na-agba ogologo njem, ị ga-ebu ụzọ zụọ ụgbọ ala otu narị afọ ma ọ bụ ihe yiri ya. Na ị nọ na igwe kwụ otu ebe ruo ọtụtụ awa naanị ịnọdụ ala ebe ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ n'ọnọdụ ihu na-aga n'ihu na igwe kwụ otu ebe karịa n'ụdị nnwale ahụ, ọ ga-adaba ọtụtụ nrụgide.
Ya mere, si na akwa a na-apụ site kwa oge, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-arị ugwu, ị ga-apụkwa. Jiri oge ndị ị ga-esi na sadulu wepụta ma nye ihe niile obere ezumike. 8:36 Ma e nwere ụfọdụ ihe ị ga-eme mgbe ị na-anọghị n'oké ihe mgbu nke dịka ịhịa aka na ịgbatị ụlọ gị niile.
Ihe ị ga - eme bụ ijide bọl tennis wee tinye ya n'ala ma ọ bụ oche wee wee nọdụ na tenis bọọlụ na ị ga - amalite site na ịbịaru nso n'akụkụ ike gị ma ị ga - emegharị ahụ gị wee gbanye ya gafere n'etiti ike gị na akpịrị wee jide n'aka na ị ga - ewepụ bọọlụ gị n'ụzọ mana ka ọ dị ntakịrị na bọl ahụ na ngwongwo, tụgharịa n'elu ya ọ ga - enye gị akwara pelvic, ịhịa aka dị mma na otu ihe ọzọ nwere ike arụ ọrụ nke ọma. Achọrọ m ịsị: ndewo, ndewo na prostate gị ma nwaa ịhịa aka na mmiri. Anyị nwere ọtụtụ ederede na ọwa a na-egosi otu esi eme ịhịa aka n'ahụ.
Ya mere, anyị agaghị abanye na nke ahụ taa, mana mara na ịhịa aka na prostate, ịga site na mkpịsị ụkwụ, na izu ike na ịgbatị ahụ ike nwekwara ike ịga ogologo ụzọ n'ihi na, maka ọtụtụ mmadụ, nro ma ọ bụ nkasi obi na-esite ọtụtụ enwere mgbatị na nrụgide na-ekpughere na mpaghara. Yabụ ịchọrọ iwelata nke ahụ, ọ bụ ya. Alsochọrọ ijide n'aka na enwere ọbara zuru ezu yana na ị na-etekwa oge ahụ oge niile.
Ka ihe niile wee na-aga n’ihu. Ọ dị mma. Ọ dị mma Anyị nwere olile anya na edemede a enyela aka ma hụ na ị debanyere aka na channelụ ngosi ụda ka amara gị ọkwa oge ọ bụla ọdịnaya dị ịtụnanya na-akụ igbe mbata gị. 10:18 Ma echefula pụọ ​​na ụgbọala
Kedu ka m ga-esi mee ka isi m ghara imerụ ahụ mgbe m na-agba ịnyịnya ígwè?
Iji nyere akagbochiechafing, were ezigbo chamois creme ma ọ bụ BodyGlide kpuchie akụkụ anụ ahụ gị na apata ụkwụ gị. Yiri eyiịgba ígwènịịka na-enweghị uwe ime.Cygba ígwèa haziri mkpụmkpụ iji belata esemokwu si seams, naihepadding na-enyere aka belata nrụgide na ebe dị nro. Hygidị ọcha dị mkpa mgbe emecharaihenọkwasi.
Ọ bụ nsogbu nke ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enwe ahụ ụfụ na mpaghara ahụ. Mgbe ogologo oge nke ịnọ ọdụ na cell, ndị ọgba tum tum ọhụrụ na ọbụna ndị na-agba ịnyịnya ígwè ruo ọtụtụ afọ gafere, ọ nwere ike belata ọ theụ nke ịgba ịnyịnya, mana ọ nwekwara ike bụrụ oke ihe egwu ma ọ bụrụ na ịhọrọ ileghara ya anya olee otu ị ga - esi gbochie ya? Ọ dị irè ugbu a dị ka ọtụtụ ọnya ndị ọzọ ị nwere ike ị n'ahụ n'ahụ gị n'oge ndụ gị, ọ bụ enweghị ọbara na-aga na mpaghara ahụ. N'okwu a, ogologo oge maka mwute iji dozie nwere ike ịpịkọta irighiri akwara na mkpụrụ ndụ ọbara na mpaghara ahụ, ọ bụrụ na ị họrọ ugbu a ileghara ya anya ma ahapụghị ya, ọ nwere ike ibute ihe a na-akpọ Allcock Syndrome na makwaara dị ka m Neve Aga m echeta na ọrịa pudendal a na-arịa ọrịa mgbochi na-ada ka ihe ị na-achọghị, yabụ ka anyị lelee ihe ole na ole ị nwere ike ime iji jide n'aka na ị gaghị enweta ya Onye ị ' nọdụrụ ọdụ ugbu a, ọdụdụ bụ ihe mmadụ n’onwe ya n’ụdị nke na-adabaghị na mmadụ, dịka ụdị uwe ọ bụla dị ugbu a n’ụdị dị iche iche.
O di nwute na nke a pụtara ịnwale ihe dị iche iche nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ị zụrụ ha oge ọ bụla, gbalịa ịgbazite otu izu ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mana site na enyi ma ọ bụ ma eleghị anya ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe ruo mgbe ị nwetara ikike ahụ maka gị na m nwere ike ikwu site na nke gị Ọ dị mma icheta na n'ozuzu ọ bụ ọdịdị nke sadulu nke na-eme nnukwu ihe dị iche na nkasi obi nkasi obi gị, ya mere, ekwela ka e chee gị eche na nke kachasị ukwuu, nke kachasị dị nro, nke kachasị mma ga-abụ nke kachasị mma, ugbu a ị nwekwara ike ịnwale ịnwale ịnyịnya nke nwere ihe nkwụsị n'etiti ma ọ bụ ụdị ọwa ugbu a ka emebere ndị a ka ọtụtụ ibu ahụ gị nọ ọdụ n'ebe ahụ na Ọkpụkpụ abụọ na-anọdụ ala n'adịghị ka anụ ahụ dị nro na wed tte a na-enye ohere ka ọbara na-asọba site na mpaghara a dị oke mkpa na otu ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ na ụmụ nwanyị n'ozuzu ha na-anọdụ ala karịa ụmụ nwoke, mana ozi ọma ahụ bụ na enwere ọtụtụ mkpọtụ ụmụ nwanyị akọwapụtara ebe ahụ nke na-ewere nke a n'uche na-esote, ebe ị na-anọdụ ala ugbu a mgbe ị na-apụ ugbu a, ị ga-anọdụ ala n'akụkụ akụkụ buru ibu karịa azụ, ọ bụrụ na ịnọdụ n'ihu, nke a nwere ike ịbụ nsogbu gị mgbe ị na-apụ ma gbalịa hụ ma ọ bụrụ na nke ahụ na-eweta ọdịiche, ọ bụ ezie na ị naghị agba mbọ ime nke a mgbe ahụ ịnwere ike ịnwa ịkwali onwe gị n'ihu centimita ma ọ bụ karịa na rails na ọzọ nke nwere ike ịme ihe dị iche ugbu a ị kwesịrị ịhazigharị akụkụ ahụ Buru n'uche sadulu gị n'ozuzu - ọ ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa zuru oke, ma e wezụga ma ọ bụrụ na ị nwere ihe miri emi nke ukwuu Enwere ezigbo nnukwu ọdụdụ na njedebe na njedebe ihu nke ikpe ị nwere ike nnwale site na ịgbada sadulu gị ntakịrị ntakịrị, mana ma ọ bụghị na ị ga-agbada na-aga n'ihu ma laghachi n'elu nke ahụ iji nọdụ na-ezighi ezi nke sadulu ugbu a ihe ikpeazụ ị ga-ahụ bụ na sadulu gị dị elu, ọ bụrụ na ị dị elu ị ga-ete site n'akụkụ ruo n'akụkụ oge ọ bụla ị na-azọ ụkwụ na nzọụkwụ, ya mere ọ bụrụ na ị na-eche na ha dị elu, naanị tinye ha ntakịrị na nke ahụ nwere ike ịbụ ihe na-arụ ọrụ maka gị ugbu a n'ikpeazụ ị chọrọ ijide n'aka na ị ga-esi na setịpụ maka 15 ruo 20 sekọnd Oge ọ bụla 15 ma ọ bụ 20 mgbe ị na-agba ịnyịnya ihe kpatara ndị mmadụ ji emesịa nweta ọrịa ndị a ọzọ na onye na-enye ọzụzụ n'ime ụlọ mgbe ha na-agba onye na-enye ọzụzụ n'ime ụlọ nke na-achọ ịnọdụ na sadulu ahụ ma ọ bụ naanị pụọ na ya maka 15 ruo 20 sekọnd kwesịrị ọbara na-agba Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-ekwughị, mana ịnya ụdị ụzọ abụọ Achamois-Azịza ịgba ịnyịnya dị ka nke a ga-eme ka ị na-agba ịnyịnya gị ka mma, mana buru n'uche na ha ga-aka oge ma bụrụ ndị ọzọ abịakọrọ ka ị ka na-eji otu mkpirisi uwe ị kpuchiri ọtụtụ puku na ọtụtụ puku kilomita na ha, ma eleghị anya ọ bụ oge itinye ego na ụzọ ọhụrụ, na mgbe ị na-ekwu maka itinye ego na taya, nnukwu ibu taya, ọ bụkwa banyere nkasi obi mgbe a chụpụrụ gị , ị c na-akwọ ụgbọala ha na a ala nsogbu, nke pụtara na gị na taya banye ọzọ bumps na vibrations si n'okporo ụzọ nke mere na gị Chassis nwere na-akpatre.
Ọ bụ ezigbo echiche ijide n'aka na ị ga-ewepụ onwe gị na ọdụ gị ntakịrị, cell gị ga - agbagha megide ahụ gị na n'ihu ihe dị ka ngwangwa ọsọ ma ọ bụ olulu nke ị na - enweghị ike izere ma ọ bụrụ na ịnọdụ ala n'ọnọdụ ndị a. 'enyere aka ma ọlị, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ntụle ole na ole iji gbalịa ịkwụsị ma ọ bụ belata mgbakasị ahụ, gbaa mbọ hụ na ị nwere ihe ịnyịnya kwesịrị gị, nke abụọ na salad gị dị n'aka nri ma ị nọ ọdụ n'aka nri idowe na sadulu akụrụngwa na-eme ka na-agba ịnyịnya dị ka nke ọma dị ka o kwere gị na-emecha ana achi achi na ị ga-esi na sadulu mgbe ụfọdụ, karịsịa na oge kwesịrị ekwesị. Ugbu a, anyị nwere isiokwu ole na ole ga - enyere gị aka ị ga - enyere aka, yabụ anyị nwere isiokwu na - egosi gị otu esi achọta ogo gị zuru oke yana n'okpuru n'okpuru enwere ndụmọdụ ole na ole banyere otu esi edozi ọnya obi na som mer mgbochi nwere ike a uhie GT logo gosipụtara na ihuenyo pịa ya ma ị nwere ike ịdenye aha na ọwa n'efu
Kedu ebe ịnọ kacha mma na igwe kwụ otu ebe?
Newzọ ọhụrụ: Mgbe ịnọdụ alankasi obi nasadulu, ị kwesịrị inwe ike mfe iru n'elu na breeki hoods na a ụzọigwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ jidere n'elu ugwuigwe kwụ otu ebe. Ikpere aka gị kwesịrị ịgbagọ, agbachila. Na ịdabere nke ahụ gị kwesịrị ịkwado site na isi gị na ntụsara ahụọnọdụ.Jun 11, 2021
Gini mere oche peloton ji adighi ala?
Kwesịrị Bike kwesịrị ekwesị nwere ike ime ma ọ bụ mebie nnukwu njem. “Ọ bụrụ na sadulu ahụ dị elu nke ukwuu ma ọ bụ dị ala, ọ gafeela ma ọ bụ gaa n’ihu, ọ ga - enweta yairu ala, ”Ka Christine na-ekwu. Iji jide n’aka na ntọala Bike gị ziri ezi, soro ndị aPọọtọntuziaka nkwado.Ọnwa Iri 28, 2020
Cycgba ígwè ọ dị njọ maka bọọlụ gị?
Testicular mmebi siịgba ígwèbụ ihe na-emekarị site na sadulu ezughị ezu (ọ bụghịịgba ígwèn'onwe ya). N'ihi ya, a na-etinye nrụgide mgbe niile nanke giakwara pudendal (akwara bụ isi dị nanke gitaint), nke nwere ike ibute mgbu, ahụ erughị ala ma ọ bụ nro na akụkụ ahụ (aka, mkpụrụ akụ).Ọnwa Ise 20, 2020
Cycgba ígwè ọ na-emetụta bọọlụ gị?
Mgbendị na-agba ígwèna-agbakwa nnukwu ihe egwu nke testicularmmebina arụ ọrụ testicular arụ. 'Abrasions, chafing, mebiri emebi ntutu isi na imebi mmadụ bụ n'etitiihekachasị traumaticịgba ígwèmmerụ ahụ. Ọsụsọ na-ebute ebe a nwekwara ike ịkpata ọnya na nsogbu akpụkpọ.Ọnwa Isii 9, 2008
Ọ dị mma iji igwe kwụ otu ebe gbaa igwe kwụ otu ebe?
Ndị mmadụ na-anwa ijigide ahụ ike na-esote aukwu njenwere ike na-ejikwa ọzụzụ site na ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ igwu mmiri, mana a ga-ezere ara mgbochi ka mmegharị ahụ metụtara nrụgide naukwuMpaghara. Gba ọsọ na igwe ịgba ọsọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ dị larịị na-arụkwa ọrụ nke ọma.
Gịnị mere m apata ụkwụ nke ime m na-afụ ụfụ mgbe m gbara ịnyịnya ígwè?
Otu ihe anyịnwere ikeha niile kwekọrịtara,buna hadịiwe naukwuebe sina-agba igwe. Hadịkpatara usoro nri ojoo, okpomoku na esemokwuna-agba ịnyịnyanke giigwe kwụ otu ebe. Akpịrị iwe na-apụtakarịihenke kachasị eluapata ụkwụ ime,ihe“Taint,” na na mgbanwe ugwu ebeụkwụghọọ ala.Ọnwa Iri 25, 2016
Gịnị mere oche ịnyịnya ígwè ji dị njọ nye nwoke?
Oche ịnyịnya ígwè na-anata nkatọ mgbe niile maka ịkpata ọtụtụ nsogbu ahụike na ụmụ nwoke. Ka mmadụ na-anọdụ ala n’oche ịnyịnya ígwè, n’etiti oche na-etinye ebe dị ukwuu nke irighiri akwara na anụ ahụ dị nro, na-akpata ihe mgbu na, ikekwe, nsogbu ahụike ogologo oge.
Obu ihe ojoo ka umu nwanyi nwee mgbu oche?
Ruo 62 pasent nke ụmụ nwanyị ndị na-asọ mpi na-agba asọmpi na-enwe mmetụta na-enwe mmetụta ụfụ, mmetụ, ma ọ bụ ihe mgbu n'ime ụbọchị 30 gara aga n'otu obere ọmụmụ nke ndị agbụrụ 48 bipụtara na Journal of Sexual Medicine. Nke ahụ bụ 62 pasent karịa, Pruitt na-ekwu.
Gịnị mere oche ịnyịnya ígwè m ji afụ ụfụ mgbe m na-agba ụkwụ?
Otu n’ime ihe ndị a na-ahụkarị na nke a na-elegharakarị anya na-akpata ime ịnyịnya ịnyịnya ígwè ime ụlọ, dị ka uru si dị, bụ oche igwe kwụ otu ebe nke dị obere ma ọ bụ karịa. Mgbe nke ọ bụla n’ime ihe atụ ndị a mere, ụkwụ gị agaghị enwe ike ịkwado ibu ahụ gị mgbe ị na-agagharị. “Anyị nwere ike ịnwekwu‘ egwuregwu ’ma ọ bụ‘ ngwa ngwa ’site na ijikwa aka anyị dị ala.